के तपाईंको "चलो यो हो" को प्रतिलिपि हो, वा के यो नकली हो?
संगीत प्रमुख कलाकारहरू
के तपाईंको प्रतिलिपि को यो वास्तविक हो या यो नकली हो?
by एंथनी रससुसेन
के तपाईंको "चलो यो हो" को प्रतिलिपि वा वास्तविक छ?
द बीटल्स को सामने आवरण "चलो यो हो" एल पी। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
के तपाईलाई थाहा छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिटलल्स ' ले यो हो (उनीहरूको चौथो र अन्तिम एलपी रिलीज) सबै समयको सबै भन्दा नकली vinyl रेकर्ड मध्ये एक थियो? हामीले यो कसरी थाहा पाउने हो भने तपाईंको प्रतिलिपि वास्तविक हो वा नकली हो भने, कृपया विवरणमा रिहाईको लागी आउनुहोस्। यहाँ हामी एल्बमको अगाडि आवरण छ। यो 8 मई 1970 मा बाहिर आउनुभयो।
द बीटल्स को रियर कवर '' चलो यो रहयो 'एल पी। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
यो पीछेको आवरण हो। सबै एल्बम प्याकेजिङमा प्रयोग गरिएका सबै तस्बिरहरू इथान रसेलद्वारा हुन्छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा, द बीटल्स "ले यो यो" ढोका खोलिएको थियो। यो खुला आवरणको बायाँ छेउ छ। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
यूएसएमा एल्बमले राम्रो ढोकाको ढोकामा पठाइएको थियो। भित्री फोटोहरू पुन: एल्बम र एल्बमको लागि रेकर्ड गरिएका गीतहरू गाईएका थिए। तिनीहरू फिल्मको लागि यो चलचित्र बन्ने कार्य गरिसकेका थिए ।
गेटफोल्ड आवरणको दाहिने तिरबाट स्टुडियोमा काम गर्ने बीटलहरूको चित्र। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
जब तपाइँ अमेरिकी गेटफोल्ड आवरण खोल्नुहुन्छ यसले यसमा बिटल्सको तस्वीरहरु समावेश गर्दछ जुन चिन इट बनीमा काम गर्दछ। (यूकेमा एल्बम डिलक्स बक्स सेटमा रिलीज गरिएको थियो र इथान रसेल द्वारा रेकर्डिङ सत्रको समयमा धेरै अधिक तस्बिरहरू लिएर फिल्मको कुराकानीको साथमा एक चमकदार, मोटो पुस्तकको साथ आयो)।
यो एल्बमको वैध प्रतिलिपिको अगाडि आवरण नजिक छ। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
यदि तपाइँसँग वैध अमेरिकी प्रेस (वा नकली) छ भने पहिचानमा सुरू गर्न मद्दतको लागि हामीले आवरणमा प्रमुख पहिचान तत्वहरू हेर्न र रेकर्ड आफैमा पनि आवश्यक छ। टेलेल लक्षणको पहिलो पछाडिको आवरणमा छ। यो जर्ज हैरिसनको छविको नजिकको छ। याद गर्नुहोस् कि यो कसरी स्पष्ट छ र उनको अनुहारको छाला टोन प्राकृतिक छन्। यो Let It Be LP को एक वास्तविक प्रतिलिपि हो।
"चलो यो हो" LP को नकली प्रतिलिपिको नजिक। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
जर्ज हैरिसन को यो नजिक र पछिल्लो स्लाइड को बीच अंतर को ध्यान दिनुहोस। यो LP को नकली प्रतिलिपि हो। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि छाला टोन अन्न हुन्छ र प्राकृतिक रूपमा हेर्नु हुँदैन। साथै, प्रत्येक तस्बिरको वरिपरि सेतो सिमानाहरू वास्तविक भन्दा भन्दा नकली प्रतिमा व्यापक छन्।
के तपाईंको प्रतिलिपि "हो यो वास्तविक हो वा नकली?"
एलपी लोगो LP को एक वैध प्रतिलिपि मा। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
चलो यो एल्बम वास्तवमा एउटै नामको चलचित्रमा एक ध्वनि ट्र्याक एल्बम भएको थियो, र त्यसैले अमेरिकामा रेकर्ड अटो कलाकारहरूको कम्पनी (कैपिटल रेकर्डहरू होइन) द्वारा वितरित गरिँदै थियो। यो अमेरिकामा साइन इन गर्न तिनीहरूले यसलाई रातो एप्पल लोगो (र पनि लेबलहरूमा) दिए। यो पीछेको आवरणमा रातो एप्पलको नजिक छ र यो रेकर्डको वास्तविक प्रतिलिपि हेर्नु पर्छ।
यो कसरी रेड एप्पल "चलो यो हो" को नकली प्रतिलिपिमा देखिन्छ। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
यो नकली प्रतिलिपिमा लोगोको नजिक छ। याद गर्नुहोस् कि एप्पल निकै गाढा र धेरै रातो रातो छ।
एलपी को एक वास्तविक प्रतिलिपि मा रातो एप्पल लेबल। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
अब हामी vinyl रेकर्ड मा फर्कन्छौं। त्यहाँ धेरै कुञ्जी संकेतकहरू छन् जसले तपाईंलाई बताउनेछ कि तपाईंको प्रतिलिपि वास्तविक हो, वा नकली। पहिलो, ती रातो एप्पल लेबल गर्दछ। यो LP को एक वास्तविक प्रेस को साइड 1 हो। याद गर्नुहोस् कि एप्पल एक धनी रातो रङ हो र पृष्ठभूमि अँध्यारो छ। जो निर्भर गर्दछ कि अमेरिकी प्रेस संयंत्र उनलाई बनाइयो थियो केहि लेबलहरु को एक चमकदार रूप हुनेछ, अन्य नहीं। तर तिनीहरू सबैको जस्तै रंगमा धनी हुनु पर्छ।
यो "चलो यो हो" LP को एक नकली प्रतिलिपि हो। नोट कसरी लेबलको मुद्रण धोईयो बाहिर। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
यसको विपरीत नकली लगाइमा लेबलहरू र बाहिर धोए। मुद्रणको गुण मात्र होइन। यो साइड2को लागि हो, जहाँ त्यहाँ "कट" एप्पल लेबल हुनु पर्छ। दुवै पक्षमा रहेका लेबलहरू छापिएको र ढिलो देखिन्छ।
"चलो यो" को वास्तविक प्रतिलिपिहरू यो स्ट्याम्प लेबलको नजिक vinyl मा हुनुपर्छ। यो बेल ध्वनि भन्नुहुन्छ। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
अर्को सुरागका लागि तपाईले तपाईको LP मा नजिकको हेर्न चाहानुहुन्छ किनकि सबै सुरागहरू सानो छन् र लेबलको नजिकै vinyl रेकर्डको "रन-आउट" क्षेत्रमा स्थित हुन्छन्। यो पहिलो दृश्य सबैभन्दा उत्तम प्रमाण हो जुन तपाईंको वैध प्रतिलिपि छ। तपाईले विनिलमा बनाइएको टिकट देख्न सक्नु भएको छ जुन शब्द " बेल ध्वनि " भन्छ। यो एकदम सानो छ र दुवै पक्षमा हुनुपर्दछ। रेकर्डको नक्कल प्रतिमा यो टिकट छैन। साँचो भनौं यो प्रेस यूएस कम्पनी द्वारा बेल साउन्ड द्वारा मास्टर गरिएको थियो। तिनीहरू Sam Feldman नामक एक प्रविधि द्वारा गरे, र यसैले तपाईं पनि आफ्नो प्रारम्भिक "एस एफ" देख्न सक्नुहुन्छ बेल बेल स्ट्याम्पको नजिकै विइनलमा।
त्यहाँ सानो, त्रिकोण "IAM" स्टाम्प पनि लेबल नजिकको vinyl मा हुनुपर्छ। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
चाइनाको वास्तविक अमेरिकी प्रतियां पनि रन-आउट क्षेत्रमा स्ट्याम्प गरिएको सानो त्रिकोण प्रतीक हुनुपर्छ। त्रिकोण भित्रको अक्षरहरू "IAM" हो। यो Machinists संघ को अन्तरराष्ट्रीय संघ जसको कार्यकर्ताहरु रेकर्ड दबाने वाला पौधेहरु भाग्यो को लागि खडा छ। यो एक उचित टिकट हुनुपर्छ, रेखाचित्र होइन। साथै, रन-आउट क्षेत्रमा उपस्थित अन्य साना अंकहरू हुन सक्दछ। यी भेदभावहरू छन् जुन अमेरिकी प्रेस बिरुवा पूंजी रेकर्डहरूले vinyl निर्माण गर्न प्रयोग गर्थे। उदाहरणका लागि LA एक छ-अङ्कित एस्टरकिस्क प्रयोग गरिएको थियो, जैक्सनभिले एक स्टाम्प0(वा ह्यान्ड-एटर्ड हे), र विनचेस्टर प्रयोग गरेको थियो जुन विन्चेस्टर राइफल जस्तो लाग्न थालेको थियो, तर यसको साइडमा टाँस्ने एउटा डाइनीगस जस्तै - <|
यो "आउनुहोस्" को नकली प्रतिलिपि हो। त्रिकोण IAM स्टाम्प vinyl मा तयार पारिएको छ। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
Fakers "IAM" टिकट को अनुकरण गर्न कोसिस गरे, तर यो वास्तविक प्रतिमाहरु मा उचित त्रिकोणीय स्टम्पको तुलनामा कच्चे रेखाचित्र जस्तो देखिन्छ। तपाईं यो छविमा नकलीको उदाहरण देख्न सक्नुहुन्छ।
"फिल + रोनी" शब्दहरू vinyl को रन-आउट क्षेत्रमा खरोंच गरियो। यो कसरी वास्तविक प्रतिलिपिमा देखिन्छ। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
अन्तमा, सैम फेल्डमैन (बेल ध्वनि मा मास्टरिंग टेक्नीशियन) ले पनि " फिल + रोनी " शब्दहरु लाई vinyl को रन-आउट क्षेत्र मा पनि खरोंच गर्यो। " फिल " फिल स्पिकेटरको लागि थियो , जसले बीटल्सको लागि चलो इट बियर उत्पादन गऱ्यो। " रोनी " गायिका रनी स्पेस्पेक्टरको लागि छ, उनको समयमा उनको श्रीमती। रेकर्डको वैध प्रतिमामा तपाईंले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ।
"चलो यो" को नकली प्रतिलिपि। शब्दहरू "फिल + रोनी" त्यहाँ छन्, तर वैध प्रतियांको रूपमा एउटै शैली होइन। एप्पल कर्प्स लिमिटेड
चलोको गैर-वैधानिक प्रतियां यो फिकर्सद्वारा भिनिलमा शब्दहरू "फिल + रोनी" स्क्रेच भएको छ, तर हस्त-लेखन फरक देखिन्छ र धेरै सानो छ।
ईगलहरू: "नयाँ देश" Goddathers
एल्विस प्रेस्ली टाइमलाइन: 1956
रक र रक को किंग को फलाल
बीटल्स गीत: "पेनी लेन"
शीर्ष 10 एल्विस प्रेस्ली पुस्तकहरु
10 Great Sgt। काली मिर्च र लेबल छविहरू
ड्रग्स र एल्विस प्रेस्लीको मृत्यु 42 मा
लाइफ र टाइम्स बेन ई राजा
पॉल स्मिथको कलेज प्रवेश
किन पूलले सुनको कपाल कपाल पार्छ?
191 क्लासिक रक लव गीतहरु वेलेंटाइन दिवस को लागी
एम्बुलिङ् र फुररल को भगवान एंबिस
विश्वविद्यालय मिशिगन-प्रियजन जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
रसायन विज्ञान परीक्षा पास गर्ने 10 युक्तिहरू
एक्सेल मा NORM.INV फंक्शन कसरी प्रयोग गर्ने
इवोल्यूशनरी विज्ञान मा विलक्षण प्रजनन सफलता
Visa TN को लागि मेक्सिको को लागि पेशेवर र एक संयुक्त राज्य अमेरिका को लागि
कलामा विश्लेषणात्मक क्युबिज्म के हो?
ओभरफिशिंग के हो?
कसरी कीराहरू उनीहरूको खाना चिसो गर्छन्
लुइसियाना विद्यार्थीहरू, K-12 को लागि सार्वजनिक स्कूलहरू नि: शुल्क स्कूलहरूको सूची
इच्छुक आलोचकहरूको लागि सुझाव
थमस एडिसनको जीवन
नृत्य बैग र के गर्न को लागि पैक
अक्षरों को पहिचान मा अभ्यास क्लॉज